Warmly Welcome: ဆူးလေဘုရားလမ်းက Bus-stop Business
ကျနော်လည်း နောက်ဆုံးကျမှပဲ သက်ပြင်းချဖို့ သတိရတော့တယ်ဗျ။ မွန်းကျပ်နေတဲ့ ဘ၀တွေကလည်း မပြောင်းလဲ။ ကျနော်တို့ရဲ့ သက်ပြင်းချသံတွေကလည်း မပြောင်းလဲ၊
ပို့စ်ဖတ်နေရင်းနဲ့ ကျနော်လဲ အသက်ရှုကြပ်လာသဗျာ..။ :)
ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ဘ၀တွေပါပဲ ..ကိုဝင်းဇော် ရေ..
very good post. I can see the realities about my own country.
P K Sahm said...
ဖတ်နေရင်းနဲ့ ကို ဆူးလေနားရောင်သွားသလိုပဲ
ရန်ကုန်ဟာ နုပျိုဆဲ။ အရင်လိုပါပဲဗျာ။ အဲ.. တိုးတက်တာတွေလည်း ရှိမှာပေါ့နော်။ ဥပမာ ပိုပူလာတာတို့၊ လူပိုရှုပ်တာတို့ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ရန်ကုန်ဟာ ရန်ကုန်ပါပဲဗျာ။
ဆူးလေဂိတ်ကနေ ၄၃ စီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို ပြန်သတိရလိုက်တာဗျာ။